သစ်ခက်သံလွင် ကဗျာသုံးသပ်ချက်၊ ကိုနိုင်း၏ ' ခေတ်ပြကွက်ကာရန်များ'
on September 09, 2017 သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍ - Articles myat hlaing
ပြတင်းတံခါးအဖွင့် ဇာခန်းဆီးအလွင့်( ၂၈ )
ပြတင်းတံခါးကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ၂၁ ရာစုခေတ်ကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်။ ဒီ ၂၁ ရာစု ခေတ်ကြီးထဲမှာ မြန်မာ ပြည်မြေပုံလေးက သေးသေးငယ်ငယ်လေးပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီသေးငယ်တဲ့မြေပုံထဲမှာ အသံပေါင်းစုံကြားနေရ တယ်။ မြန်မာပြည်အနောက်ဖက်က ကမ်းရိုးတမ်းဒေသ သေးသေးလေးမှာ ကမ်းခြေကိုတိုက်ခတ်လာတဲ့ မုန်တိုင်းက စည်းရိုးကိုချိုးဖျက်ဖို့ ကြိုးစားနေသံတွေ။ ဒဂုန်တာရာရဲ့ လေနုအေးကိုအစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်သမားတွေက ဓားတွေနဲ့ ပိုင်းဖြတ်လိုက်တော့ ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့မနက်ခင်းတွေ တစစီလွင့်စင် သွားတယ်။ ပြေးကြ လွှားကြ ရှောင်ကြ ပုန်းခိုကြတဲ့အသံတွေ။
နောက် မြန်မာပြည်မြောက်ဖျားတောင်တန်းတွေပေါ်က သေနတ် သံတွေ၊ ဗုံးခွဲသံတွေ။ ဟိုဘက်နဲ့ ဒီဘက် ပစ်ခတ် သတ်ဖြတ်သံတွေ ကလည်း မတိတ်နိုင်သေး။
မြန်မာပြည်ကြီးငြိမ်းချမ်းအောင် ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံထဲမှာတော့ တိတ်ဆိတ်နေတယ်။
သူသတ်ကိုယ်ပြေး၊ သူပြေးကိုယ်သတ်နဲ့ အလစ်ချောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတ်သူနဲ့ပြေးသူတွေက အပစ်ရပ် စားပွဲပေါ်ထိုင်နေကြတယ်။ သွေးမစီးတဲ့လက်အချင်းချင်း လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေတဲ့ လက်တွေက အေးစက် ခဲလို့။
မြို့ပြနဲ့ကျေးလက်တွေမှာလည်း လယ်လုပ်သူလယ်ပျောက်နေတဲ့ အသံတွေ၊ စက်ရုံတွေထဲက ထွက်လာတဲ့ ထမင်းငတ်နေတဲ့ အသံ တွေ၊ တရားရုံးမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ မတရားဥပဒေကို စိတ်ပျက် ညည်းညူနေတဲ့ အသံတွေ၊ မြို့လယ်ခေါင်မှာ ဓားပြတိုက်သွားတဲ့ အသံတွေ၊ လူသတ်နေတဲ့အသံတွေ၊ လုယက်မှုဆိုတာ ထမင်းစား ရေသောက်လောက်ပါပဲလို့ ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်နေတဲ့အသံတွေ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဟာ ကြောက်ခေတ်ကိုရောက်နေပြီလား။
တွေးနေရင်းအပြင်ဖက်ကကျီးအော်သံတွေကြားလိုက်ရတယ်။ ဒီကျီးကန်းတွေဘယ်သူ အော်ခိုင်းတာ လဲ၊၂၀၁၇ သြဂတ်လ၊ မိုးမခ မဂ္ဂဇင်း ထဲက ကျီးကန်းအော်သံတွေပေါ့။ အော်ခိုင်းသူက ကဗျာ ဆရာ နေထက်နိုင် ဆိုသူပေါ့။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် နှစ်ဆယ့်လေးနာရီ ကျီးကန်းတွေလို
မကြာခင်က မီဒီယာလောကထဲမှာဝိုင်းအော်သလို အော်ခဲ့ကြတဲ့ ကျီးကန်းတွေကို မထင်မှတ်ပဲသတိရ လိုက်တယ်။
ဒီနေရာမှာ စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ စိတ်ဝင်စားသွားသလို နည်းနည်းလောက်ပြောချင်စိတ်ဖြစ်လာတယ်။ ကဗျာဖတ်တာဘယ်လိုလူစားတွေလဲ။ ကဗျာဖတ်တဲ့လူတန်းစားသပ်သပ်ရှိနေပါတယ်။ ခေတ်ပေါ်ကဗျာ တွေက လူတွေအတွက် ခံစားပြီးရေးတယ်။ လူတွေက ခေတ်ပေါ်ကဗျာကိုမဖတ်ဘူးဆိုရင်၊ လူတွေက လည်း ကျီးကန်းတွေဖြစ်သွားပြီ။
ပြောချင်တာက မီဒီယာတွေက ကျီးကန်းတွေလို ကိုယ့်ကိုထိလို့ ဝိုင်းအော်တတ်ကြရင် မီဒီယာသမားတွေ ဟာ ကဗျာဖတ်ဖို့တော့လိုပါတယ်။ ကဗျာမဖတ်တဲ့လူတွေအတွက် ကိုယ်စားဝင်ခံစားနိုင်မှ မီဒီယာသမားဖြစ် နိုင်မယ်မဟုတ်လား။
ငါတို့ရေချိုးတယ်၊ ကျီးကန်းတွေလည်း ချိုးပါတယ်
ကျီးကန်းတွေလည်း သူတို့ကိုယ် သူတို့ သကြတယ်
ငါတို့လည်း ငါတို့ကိုယ် ငါတို့ သကြတယ်။
ဒီနေရာမှာလည်းပြောချင်တာလေးပေါ်လာပြန်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ရေချိုးကြပါတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာ သန့်ရှင်း အောင်၊ ကျန်းမာရေးအတွက်။ ဒါတွေထက်ပိုအရေးကြီးတာက စိတ်တွေကို ရေချိုးဖို့လိုပါတယ်။ စိတ်တွေ လည်း သန့်ရှင်းနေမှ။ စိတ်တွေလည်းကျန်းမာသန်စွမ်းနေမှ။ လောကကြီးလည်း လှလာမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျီး ကန်းတွေရေချိုးသလိုတော့မဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ ကျီးကန်းတွေကရေဘယ်လောက်ချိုးချိုး ဖြူမလာပါဘူး။ ကျီး ကန်းတွေရဲ့အော်သံကို ဆက်နားထောင်ကြဦးစို့။
ငါတို့က မနက်စာစားဖို့ ပိုက်ဆံအမြဲလိုခဲ့တယ်
ငါတို့က နေ့လည်စာကို စားသောက်ဆိုင်မှာစားတဲ့အခါ
ကျီးကန်းတွေက၊ လမ်းဘေးက အကောင်သေတွေ စားကြတယ်။
ငါတို့မှာ ညီညွတ်တဲ့အော်သံတွေ အမြဲမရှိဘူး
ကျီးကန်းတွေမှာ ညီညွတ်တဲ့အော်သံတွေ အမြဲရှိတယ်။
ကျီးကန်းတွေက သူတို့အမျိုးအတွက် အော်ကြတယ်
ကျီးကန်းတွေအော်သလိုလူတွေလည်း ကိုယ့်အမျိုးကိုထိရင် အော်တတ်ကြပါတယ်။ ကဗျာဆရာပြောသလို ပါပဲ။ အခွင့်အရေးအတွက်ဆို ပိုအော်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါပေမဲ့ပေါ့။ ဒီနိုင်ငံမှာအခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးနေတာကြာလှပါပြီ။ ဘယ်လိုအော်အော် အော်တာပဲဖြစ်နေတာတော့ ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါတယ်။
ကျီးကန်းတစ်ကောင်က နင့်အိမ်နား သစ်ပင်ပေါ်ကနေ
သာသာယာယာ အ အ သံပေးရင်
အဲဒီအချိန်မှာ နင်က မအားချင်ယောင်ဆောင်တယ်။
ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဓလေ့ဟာ ဧည့်လာရင် အိမ်သာတတ်တယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆ ရှိခဲ့ကြပါ တယ်။
အခုအချိန်မှာတော့ ဒီအယူအဆဟာ တဖြည်းဖြည်း ပျောက်ကွယ်လုမတတ်ဖြစ်နေပါပြီ။ဧည့်သည်လာရင် ညေ့်ဝတ်မကျေမှာကိုစိုးရိမ်တတ်ကြတဲ့အကြောက်တရားက မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့တွေကို ဝါးမြိုလိုက်ပါပြီ။ ခေတ်အခြေအနေအရ လူမှုရေးတွေ ပါးလျကုန်ပါပြီ။ အိမ်ရှင်တွေအနေနဲ့လည်း ဧည့်သည် လာမှာကိုကြောက်နေသလို ဧည့်သည် တွေအနေနဲ့လည်း အလည်သွားရမှာကြောက်နေတဲ့ခေတ်ကို ရောက်နေပါပြီ။
ဒါပေမဲ့ ကျီးကန်းတွေနဲ့ တူတူလာတယ်။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ပြောရရင် ကျီးကန်းတွေနဲ့တူနေခဲ့တာကြာလှပါပြီ။ကျီးကန်းတွေလို အော်တတ်တာက မကြာသေးဘူးဆိုပေမယ့် ကျီးလန့်စာစားဘဝတွေဖြစ်တာကြာခဲ့ပါပြီ။ အော်တတ်ခဲ့တာမကြာသေးဘူးဆို တာက မအော်နိုင်အောင် ဖိနှိပ်ထားတဲ့အခြေအနေကြောင့် ဆိုတာကိုတော့မပြောလည်း သိကြမှာပါ။
ကျီးကန်းအော်သံတွေဆီကနေ အတွေးကို တောင်တန်းတွေဆီပို့လိုက်တယ်။ တောင်တန်းတွေပေါ်မှာ စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အသံတွေကို ကြားနေရတယ်။ စစ်ပွဲတွေမှာ ဘယ်သူတွေပြေးနေကြရသလဲ။ ဘယ်သူ တွေဒုက္ခရောက်နေကြသလဲ။ ဒီလိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကိုမသနားကြတော့ဘူးလား။ ကိုယ်ချင်းစာနာ စိတ်လေး မရှိနိုင်တော့ဘူးလား။
အတွေးထဲကို ဒီစစ်ပွဲတွေပြီးသွားရင် ကောင်းမှာပဲလို့တွေးလိုက်မိတယ်။ ဒီလိုအတွေးကိုတွေးနေတဲ့ ကဗျာ ဆရာတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ ဒါကို ၂၀၁၇ စက်တင်ဘာ ရုပ်ရှင်တေးကဗျာမဂ္ဂဇင်း ထဲမှာ ကဗျာ ဆရာ မိုးဝေး က စစ်ပြီးစ နှစ်များ ဆိုပြီး ရေးထားပါတယ်။
ဘဝထံ ပြန်လာတဲ့ သစ်ရွက်
ခြေထောက်တဖက် မရှိတော့တာ မေ့ကြတယ်။
မမြင်ရတော့တဲ့ မျက်လုံးထဲမှာ ပြန်တွေ့ကြတယ်။
တကယ်တော့စစ်ပွဲတွေပြီးဆုံးချိန်တန်နေပါပြီ။ စစ်ပွဲတွေမပြီးဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်နေကြတာ အတ္တစိတ်တွေ ပြိုင် နေတာလား။ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက် နယ်မြေလုနေတဲ့လူသတ်မှုတွေလား ဒါတွေမရှိတော့မှ စစ်ပွဲ တွေ ရပ်နိုင်မှာပါ။ အတ္တစိတ်တွေဖယ်ခွာပြီးတော့ ”လာညီနောင်တို့၊ တို့ဖြစ်နေတဲ့ စစ်ပွဲတွေ ရပ်လိုက်ကြစို့၊ စစ်ပွဲ ကြောင့် နယ်မြေစွန့်ပြီးပြေးရှောင်နေရတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို နေရပ်ကိုပြန်ပို့ကြစို့ ” ဆိုရင် ဒါကို ကဗျာ ဆရာက ဘဝထံပြန်လာတဲ့သစ်ရွက်လေးနဲ့ တင်စားပြထားပါတယ်။ ဒီသစ်ရွက်လေးကရောနေခဲ့တဲ့ နေရာ ကိုမေ့နေမှာလား။
ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေအပြည့်နဲ့ နေရပ်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်ထားဦးတော့ ပြေးနေရတဲ့နှစ်တွေ ကြာတော့ မေ့နေမှာပါပဲ။ မျက်လုံးထဲမှာပြန်တွေးကြည့်ပြီး ကြည့်နေတာတောင် ပြန်မမြင်ရတော့ဘူး။ စစ်ပြီးစ နှစ်များ ကို တွေးပြီးရေးပြသွားတာလှတော့လှတယ်လောက်ပဲ ထားရတော့မှာပါပဲ။ ကဗျာဆရာကနောက်ဆုံးရေးသွားသလို” တို့ စောင့်ကြရဦးမယ်”။
ဒီလိုစောင့်နေရတဲ့ကာလတွေမှာကဗျာအပြင်ဘက်မှာဘဝတွေရှိနေဦးမှာပါ။ ဒါကို ခေတ်ရနံ့ မဂ္ဂဇင်း ထဲကကဗျာဆရာ လင်းခ(မော်လမြိုင်) ကအပြပုံစံမျိုးနဲ့မြင်တွေ့နေရတဲ့ မြင်ကွင်းလေးတခု၊ ကြားနေရတဲ့ အသံကို ရေးပြသွားတာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
ပေါ်တာပါသွားလို့ မိုင်းနင်းမိပြီး ပြန်မလာသလိုလို
ပလတ်စတစ်ကောက်ရင်း ဗိုက်အဆာပြေအောင် ကော်ရှုတယ်လေ။
တချို့က ကျွန်တော့်လို ပလတ်စတစ်ကောက်တယ်
တချို့က လမ်းဘေးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ စားပွဲထိုးတယ်
တချို့က မီးပွိုင့်လမ်းဆုံတွေမှာ စံပယ်ပန်းရောင်းတယ်
တချို့က အမှိုက်လှည်းတွေနဲ့ အမှိုက်လိုက်သိမ်းတယ်။
ကြားလိုက်ရတဲ့အသံတွေက ကြားနေကျမို့ပေမယ့်လည်း ရင်ထဲကို ဆို့နင့်သွားမြဲပါပဲ။ ဒီလိုမြင်ကွင်းတွေ ပျောက်ကွယ်သွားရအောင်ဆိုတာကလည်း စောင့်ရဦးမှာပါလို့ပြောရင်း အဖြူအစိမ်းနဲ့ စပယ်ဖူးလေးတွေ ပွင့်လန်းရှင်သန်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းရုံကလွဲပြီး.....။
၁။ နေထက်နိုင်(ကျီးကန်း)၊ မိုးမခမဂ္ဂဇင်း၊ သြဂတ်လ၊၂၀၁၇။
၂။ မိုးဝေး(စစ်ပြီးစ နှစ်များ)၊ ရုပ်ရှင်တေးကဗျာမဂ္ဂဇင်း၊ စက်တင်ဘာဘ၊၂၀၁၇။
၃။ လင်းခ(မော်လမြိုင်) (ဒီကဗျာအပြင်ဘက်မှာ ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေရှိတယ်)၊ ခေတ်ရနံ့မဂ္ဂဇင်း၊ စက်တင်ဘာလ၊၂၀၁၇။
- The Sun Rays Journal, Vol 1. No 164.9Sep 2017